बालुवाटारमा रामशरण महतले अर्थमन्त्री कार्कीलाई झम्टिएपछि… – Etajakhabar
बालुवाटारमा रामशरण महतले अर्थमन्त्री कार्कीलाई झम्टिएपछि…
काठमाडौं, २ फागुन। कांग्रेसका एकजना बूढा अर्थमन्त्रीले वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई बच्चा भनेपछि देउवा र पौडेल क्याम्पबीचको खाडल झन् गहिरो बनाइदिएका छन् ।
संघीय निर्वाचनमा अर्थमन्त्रीले आफूलाई भनेजति खर्च नदिएपछि सबैभन्दा लामो समय अर्थमन्त्रालय चलाएका कांग्रेस नेता रामशरण महतले यो रिस पोखेका हुन् ।
आफूले निर्वाचनताका सँधै ठूलो रकम खर्च गरेर पार्टीलाई जिताउने गरेको उदाहरण नेताहरुको बसाईमा पेश गर्थे । कतिपयले आरजुले धनगढीमा किनेको घरका लागि ज्ञानेन्द्र कार्कीले नै रकमको जाहो गरिदिएको बताएका छन् । यसका लागि उनले नाम चलेको एक व्यापारिक घरानालाई करमा छुट दिएर यो रकम निकालेको पनि भन्ने गरेका छन् ।
६५ वर्षमै वृद्धाभत्ता दिने निर्णयपछि राष्ट्रिसभा निर्वाचनको विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा रामशरणले अर्थमन्त्री कार्कीलाई झम्टिएका थिए । उक्त बैठकमा निर्णय ठिक भएको र यसले ओली सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्नसक्ने बताइएसँगै बच्चा अर्थमन्त्री भनेर झम्टिएका थिए । जनआस्थामा खबर छ ।
महतले ‘तिमीलाई अर्थतन्त्र के थाहा छ ? कुन आधारमा देशलाई दीर्घकालिन यतिठूला असर पार्नेगरी यो निर्णय गर्यौ ? रकम कहाँबाट आउँछ यसरी ? यस्तो बच्चा निर्णयलाई लोकले के भनेको छ, सुनेका छौं ?’ भनेर झम्टिएपछि अरु सदस्यले रोक्नुपरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण ०२, २०७४ समय: ११:०४:१५
शाखा अधिकृत ढुङ्गानाविरुद्ध मुद्दा दायर, सरकारी जागीर खाएर गर्थे यस्तो तल्लो स्तरको काम
विश्वकपको अन्तिम मौकामा अर्जेन्टिनाका प्रशिक्षक जर्ज साम्पाओलीले भनेको होइन मेस्सीले भनेको तरिकाले खेलिने छ !
नेपालकै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी संख्या भएको बुटवलको कालिका मानव ज्ञान माविबाट एसईईमा नेपाल भरिकै स्कुलको भन्दा उत्कृस्ट नम्बर ल्याउदै धेरै बिद्यार्थी पास गरायो !
जापान भर्सेस सेनेगल : सेनेगललाई गोल फर्कायो जापानले, खेल १-१ को बराबरीमा
सावधान ! यस्तो रहेछ काठमाडौँका धारामा धमिलो पानी घुतुतु आउनुको रहस्य
विदेशीबाट ऋण ल्याएर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न सुझाव
क्रिस्टियानो रोनाल्डोले जब एक अपाङ्ग बालिकालाई व्हिल चेयरमा डोर्याउदै मैदानमा लिएर आए जुन दृश्य हेर्दा सबै भावुक बने (भिडियोसहित)
एसईई परीक्षाको नतिजा आज सार्वजनिक हुँदै, आफ्नो मोबाइलबाट यसरि नतिजा हेर्न सकिने
आलोचनाकाबिच सलमान खानको ‘रेस ३’ले गर्यो १ सातामा नै अपत्यारिलो ब्यापार, बन्यो सर्वाधिक ब्यापार गर्ने सिक्वेल
कन्ट्रोभर्सी क्विन राखी सावन्त जीन्दगीकै अप्ठ्यारो मोडमा, यस्तो भिडियो पोष्ट गरेपछि आयो ज्यान मार्ने धम्की
विश्वकपमा ह्याट्रिक गरेका रोनाल्डोको नाममा विमानस्थलको नाम परिबर्तन गरि ‘क्रिस्टियानो रोनाल्डो माडेएरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ बनाइयो !
यो विश्वकपकै आत्मघाती गोलबाट अभागी साबित भएको मोरोक्कोले स्पेनलाई हराएर राख्न चाहन्छ यस्तो इतिहाँस !
पोर्चुगललाई इरानले हराउन निकै आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुदै, इरानको रक्षापंक्ति जारी विश्वकपकै सबैभन्दा बलियो ! सक्ला त रोनाल्डोलाई रोक्न ?
दुई कोरियाको इतिहाँसमा पहिलोपटक फेरी अर्को ठुलो काम हुँदै, २ देशका नेताहरुबीच भयो यस्तो सहमति
भारतीय क्रिकेटर धोनीकी पत्नी साक्षीलाई ज्यानको खतरा बढ्यो, हतियार राख्न अनुमति माग्दै यसो भनिन्